Yikuphi Apple MacBook laptop okufanele ngiyithenge? - Izindaba Rule
Mary idinga ukuthatha isikhundla sakhe 2009 MacBook Pro kodwa ekhungethwe izinketho. Yikuphi lesikahle?
Lesi sihloko osesikhundleni “Yikuphi Apple MacBook laptop okufanele ngiyithenge?” lalotshwa Jack Schofield, I-theguardian.com ngoLwesine 15 Novemba 2018 10.00 UTC
Ngiye soldiered ku nge 2009 MacBook Pro, okuyinto ngisebenzisa i-inthanethi, social media, izithombe, nocwaningo yami. Kodwa ukuze ufinyelele umtapo enyuvesi ukude, Kudingeka ngisebenzise isistimu yokusebenza up-to-date, ne-Mac yami isindala ngakho Angisakwazi libuyekeze.
Ngakho, Ngidinga ukuthenga MacBook entsha, kepha mina ngingowenyama isindwa ongakhetha. Ingabe Ngidinga Ibha Touch? Kungakanani inkumbulo futhi SSD ingabe ngidinga? Mary
Ukulandela umkhiqizo uvuselele ku 30 October, Apple has MacBooks nokune okwenza okuningi umsebenzi ofanayo. Izindaba ezinhle ukuthi, uma ungakwazi ukusinda kwi 2009 MacBook Pro, phi of them kungaba esihle izinjongo zakho. Izindaba ezimbi ukuthi zonke zibe izici bangifake off uzithenge, Nokho, nge inhlanhla, ngeke ngempela sikubeke off.
Nokho, Angicabangi kubalulekile ukuvakashela i Apple Store noma ezinye yesitokwe ukuze ukwazi ukuqhathanisa okungenani ezimbili 13in MacBooks side by side. Lawa MacBook Air ubudala (ikhibhodi engcono, isihenqo okubi kakhulu) kanye MacBook Pro (ikhibhodi esisabekayo, isihenqo esikhulu).
Ngingakutshela okuyinto chips ayashesha, njalo njalo, kodwa umuzwa wakho kuyothonywa ukuzicabangela izinga ikhibhodi screen. Iposi ibhulogi abakwazi ukukutshela yibaphi uyobe othanda, noma lapho ungathanda nokubonelela.
Zonke Mac laptops amasha ihambisane Apple ongaphakeme-travel butterfly ikhibhodi, okuyinto eye kungase kutholakale ahlukanisayo. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Kwami, Inkinga enkulu nge MacBooks entsha ikhibhodi butterfly, okuyinto yethulwa ne 12e MacBook e 2015. Le nguqulo yesibili uvele MacBook Pros, lapho eziningi abasebenzisi ababe ikhibhodi ukwehluleka ngenxa uthuli noma detritus kokuthola ngaphansi okhiye. I MacBooks zakamuva inguqulo owesithathu kanye ukubekwa uphawu esengeziwe uqhelise uthuli. Sine kodwa ukubona injena kanjani ngokuhamba kwesikhathi.
Ngaphandle kwalokho, Ngithola ikhibhodi butterfly ihlinzeka enyantisayo ukuthayipha isipiliyoni. Ngafunda uthinte-hlobo ku imishini yokubhala, futhi ngincamela ikhibhodi nokhiye mechanical kunothile travel. Butterfly okhiye babe cishe akukho travel. Lokhu kuzokwenzeka push kimi ekufezeni MacBook Air ubudala, okuyinto has a ikhibhodi ezinhle kakhulu ngezindinganiso laptop.
Ngokudabukisayo, the MacBook Air ubudala unezinye izinkinga. Ngokuqondene, iphedi futhi isikrini zimbi kakhulu esizibona entsha MacBook Air. (Akuzona ezimbi, kodwa abakwazi ukusho njengoba ezinhle.)
Ngokujabulisayo, okuthandwa ziyahlukahluka. Abanye abantu bakhetha flat, ikhibhodi ayiphenduli, wena ungase ukuthole uthanda ikhibhodi butterfly. Uma kunjalo, kwenza okukhethayo kulula. Ngicabanga kudingeka lona go sina nje - thayipha amagama ambalwa kuwo - ngaphambi kokuba uzibophezele komunye uyisebenzisa usuku lonke nsuku zonke ... noma ethwele zangaphandle Ikhibhodi ye-USB emhlabeni.
Thinta Bar? Ungenzi
I Touch Ibha ubuyisela F okhiye MacBook Pro. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Awudingi Bar Touch. Empeleni, akekho okudingeka ngempela Touch Bar. Noma kunjalo, bamane nje zifakwa the ezibizayo MacBook Pros, futhi ngiphetha ngokuthi ungumuntu awunasithakazelo ekuthengeni a MacBook kakhulu eqolo ngaphezu kwanoma udinga.
The 13phakathi no-2009 MacBook Pro wavelelwa Intel Core 2 duo processor, okuyinto ebuhlungu ngezindinganiso zanamuhla. Imodeli base kwadingeka 2GB kuphela memory (anwebekayo ukuze 8GB) kanye 160GB hard drive, Nokho ngokwezifiso ngcono kuhlanganisiwe 128GB futhi 256GB SSDs. I MacBook phakathi ungathenga namuhla kuyodingeka Ukucaciswa kangcono.
Ngeshwa, ungakwazi ukuthuthukisa MacBooks lanamuhla, ngakho une ukuthenga amandla kaningi njengokuthanda kwakho oyophinde. Ukuze nempilo ende, kungaba ngcono ukuba 16GB inkumbulo futhi 256GB noma SSD emikhulu, kodwa Apple uyala premium omkhulu lezi ngcono.
Ngenhlanhla, MacBooks ubambe value abo kahle, ngakho okunye okungenziwa ukuba baye for the base Spec futhi, uma uthola udinga amandla angaphezulu, ukuthengisa futhi ukuthenga entsha.
I MacBook isebenzisa ongaphakeme-amandla izilimi Intel. Photograph: I-Apula
Kunenkinga non-asobala ukuthi ezimbili MacBooks yakho kungenzeka baye Intel Core M izilimi, okuyinto bayekelele isivinini ukunikeza ukuphila kwebhetri kangcono. Apple kuqala wazama lokhu 1.1GHz ezimbili-core M-5Y31 chip asetshenziswe 2015 MacBook (12e screen). Namuhla, Core M chips azisetshenziselwa e MacBooks 12Ngomnyaka, kodwa futhi yakamuva MacBook AIRS.
Akukona sobala ngoba Intel washintsha yokuqamba yayo isikimu. Abantu abangase ziye silahle yi "Core M" isiqu cishe ngeke uphawule ukuthi bathola uchungechunge Y chip - ngokuqondile, a i5-8210Y Core - esikhundleni namandla kakhulu U uchungechunge chips elisetshenziswa kuqhakanjiswe laptops.
I abanalutho ngokumelene Core M / Y uchungechunge chips, futhi 8GB / 128GB touch-screen yami Lenovo Yoga 700 okufanayo Core M3-6Y30 uye wasebenzisa kwezinye MacBooks. Umehluko wukuthi kungcono umshini ukuze abayitoho / ukusetshenziswa iholide, hhayi uhlelo kwami ​​okukhulu futhi kuphela kubiza nami £ 339,99. Bengingeke ukuthenga eyodwa njengoba umshini wami oyinhloko, futhi ukushaja £ 1,200 oyedwa kuyaxaka.
A Core i5-8210Y kufanele kube fast ngokwanele ngoba ukukhanya kwakho isebenzisa - okungase lukhule ngokuhamba kwesikhathi - kodwa namanje ukubaluleka abampofu imali MacBook Air.
Apple MacBook Air ubudala. Photograph: Simon AbakwaLee / Ikusasa Publishing / Rex
Apple aye wasigcina elidala 13in MacBook Air, futhi kubukeka inani kangcono imali £ 949, naphezu isikrini sayo sesihlanu Core i5-5350U processor non--retina. Ine, ngokombono wami, ikhibhodi engcono, futhi usenayo nezimbobo ezinhle uyisidala, kuhlanganise i embobeni yekhadi le-SD kanye Isixhumi magsafe. Kuzo zonke ezinye izici, entsha MacBook Air (2018) uphakeme.
Esidala MacBook 12Ngomnyaka isatholakala, kodwa kungcono underpowered futhi overpriced, ne 1.2GHz Core M3-7Y32 version (2017) kubiza £ 1.249. Isizathu kuphela ucabangela kulo mshini wukuthi kungcono letincane kakhulu, futsi akhanya (0.92kg) MacBook ungathola.
Entsha 13in MacBook Air mncane futhi ulula kunalokhu version elidala, has a screen lizidlula kude, ezinkulu amandla-touch isiqeshana sokuhambisa iminwe, nezipikha kangcono. Kuba njalo ezibizayo ngesikhathi £ 1.199. I nemiphumela ethile engathandeki zihlanganisa ikhibhodi butterfly kanye Core M / Y uchungechunge processor.
Ekugcineni, kuba khona 13in MacBook Pro ngaphandle Touch Bar (Maphakathi nawo-2017), esihlinzeka ngokushesha lwesikhombisa-isizukulwane 2.3GHz Core i5 (7360I) amagama, ihluzo ngcono kakhulu futhi kangcono umbala ukuhumusha i extra £ 50, ie £ 1.249. I Pro Ubuye isikrini licace - 500 nit angu esikhundleni 300 nit angu - okumele ube ngcono kakhulu ukusetshenziswa ongaphandle. Ulahlekelwa nhlonhlo ijamo Air sika, okuyinto ngokunethezeka ngoba ukuthayipha, kodwa Pro akuyona kakhulu nzima kuletshebetshebe Air entsha (1.37kg vs 1.25kg).
Ngingathanda le MacBook Pro ngaphezulu sengathi Air ikhibhodi ubudala, kodwa kubonakala kimi kungcono Thenga engcono - uma ungakwazi yini ukusikhokhela. Ngicabanga ukuthi ukubheja yakho okungcono kakhulu zesistimu yokusebenza esizayo.
Ukuthuthukiswa kukhona, njengoba kushiwo, ezibizayo. Ukwandisa 8GB Pro sika imemori 16GB kubiza £ 180, futhi ngcono 128GB SSD ukuze 256GB kubiza £ 200, ngakho Spec ufuna ngempela kubiza £ 1.629. Ukungeza AppleCare ahlangabezana inani lokugcina efika ku- £ 1,878.
Kuyinto imali eningi, kodwa bacabanga ngayo njengendawo £ 1 usuku eminyakeni emihlanu futhi ngeke kabi ngakho.
Njengoba umfundi, kufanele asifanelekele Isaphulelo zemfundo, oyoletha phansi intengo. Hlola ukuze uthole ukuthi ngabe kungcono ukwenza lokhu nge enyuvesi yakho, online, noma i-Apple Store.
Apple inikeza ukuhweba-in ku imishini ubudala nge yayo Buyisa uhlelo. Angikwazi ukutshela malini ngingafuni ngaphandle inombolo ye-serial MacBook yakho Pro. Kungenzeka kungabi okuningi, kodwa okungenani ihhashi lempi ubudala ngabe kabusha kahle.
Uke got umbuzo? Email yona Ask.Jack@theguardian.com
20164	3 Yikuphi Apple MacBook laptop okufanele ngiyithenge?
← OnePlus 6T ukubuyekeza The 20 amagajethi best of 2018 →